Are there medicines to prevent my child getting COVID-19: Ngike ngizwa ukuthi kuneminye imithi namakhambi engingawanika ingane yami ukuyivimbela ukuthola i-COVID-19 - ingabe kuyiqiniso? – Messages for Mothers
Are there medicines to prevent my child getting COVID-19: Ngike ngizwa ukuthi kuneminye imithi namakhambi engingawanika ingane yami ukuyivimbela ukuthola i-COVID-19 – ingabe kuyiqiniso?
Qaphela ‘izindaba ezingamanga’!!
Luningi ulwazi olungamanga nolungalungile oludluliswa ngalesi sikhathi.
Azikho izithasiselo ezithile noma amavithamini noma amakhambi noma imithi evimbela i-COVID-19 ezinganeni (noma kubantu abadala)
Ukuze uhlale uphilile, yidla ukudla okunempilo (izithelo nemifino eminingi), uzivocavoce nsuku zonke, ulale ngokwanele futhi uzame ukungakhathazeki ngokweqile.
← What can I do if my child does not like to wear a mask: Yini engingayenza uma ingane yami ingathandi ukufaka isifihla-buso? → How will I know if my child has COVID-19: Ngizokwazi kanjani ukuthi ingane yami ine-COVID-19?